2 YEZIGANEKO 8 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
2 YEZIGANEKO 82 YEZIGANE ... 8
(1 Kum 9:10-28)
81Ke kaloku ekupheleni kwamashumi amabini eminyaka, xesha elo walithathayo uSolomon ekwakheni kwakhe indlu kaNdikhoyo kunye nebhotwe lakhe, 2uSolomon wazihlaziya iidolophu awayeziphiwe nguHiram,Apha nakwivesi ye-18 uHiram ubizwa ngokuba nguHuram waza ke wamisa amaSirayeli kuzo. 3USolomon waya kuhlasela iHamati-zobha wayithimba. 4Kananjalo wayakha iTademore entlango phaya, ndawonye nazo zonke izixeko ezingoovimba awazimisa eHamati. 5Wayihlaziya neBhete-horon ephezulu ndawonye naleyo isezantsi, wazenza iinqaba ezibiyelweyo ngeendonga ezinamasango nemivalo, 6kwakunye neBhalati nazo zonke izixeko zakhe ezingoovimba, nezixeko zeenqwelo kunye nezamahashe akhe, nayo nantoni na awayakhayo eJerusalem naseLebhanon, ukanti nakuwo wonke ummandla awayewulawula.
7Bekukho abantu ababesele kwiintlanga zamaHiti, ama-Amori, amaPerezi, amaHivi, namaJebhusi. Ezi ntlanga ke zazingengawo amaSirayeli, 8koko zazisisizukulwana sazo esasingatshatyalaliswanga ngamaSirayeli. Ke uSolomon wazigaya zonke zalibutho labasebenzi abanyanzelwayo, njengoko kusenjalo unanamhla. 9Kambe ke uSolomon lo amaSirayeli akawafakanga kwibutho labasebenza ngokunyanzelwa, koko wawagayela kumabutho omkhosi, aba ziingqwayi-ngqwayi zomkhosi nababhexeshi beenqwelo, nabakhweli-mahashe. 10Amanye ke ayengamaphakathi aphambili kakumkani uSolomon, engamagosa angamakhulu amabini anamashumi amahlanu awayongamele amadoda.
11Ke kaloku uSolomon wamkhupha umkakhe owayeyintombi yokumkani waseJiputaOkanye “kaFaro” igama ababebizwa ngalo mandulo ookumkani baseJiputa phaya kwisixeko sikaDavide, wamsa kwelo bhotwe wayemakhele lona, kuba wayesithi: “Umfazi wam akanakuhlala kwisixeko sikaDavide ukumkani wakwaSirayeli, kuba ifakwe khona ityesi kaNdikhoyo; ngoko ke siyindawo engcwele.”
12Kwiqonga likaNdikhoyo awayelakhile phambi kwevaranda uSolomon wanikela amadini atshiswayo kuNdikhoyo, 13loo nto eyenza ngokwemfuneko nommiselo wemini nganye, ngokomlomo kaMosis mayela *neMihla yoPhumlo,Ntlango 28:9-10 ukuthwasa kwenyanga,Ntlango 28:11-15 naloo matheko mathathu ayesenziwa minyaka leMfud 23:14-17; 34:22-23; Ntlango 28:16 – 29:39; Hlaz 16:16 – itheko lezonka ezinganyuswanga, itheko lolibo, netheko lamaphempe. 14Ngokommiselo kayise uDavide naye wazimisa izigaba zababingeleli ngokwemisebenzi yabo, waza ke bona abaLevi wabamisela ukuba babhexeshe iingoma, nokuba basebenzisane nababingeleli ngokweemfuneko zemini nganye. Kananjalo wamisela nabagcini-masango ngokwamasango lawo ahlukeneyo. Kaloku lowo yayingummiselo kaDavide umfo wakwaThixo. 15Ewe, zange banxaxhe nakanye kwizimiso zikakumkani malunga nababingeleli nabaLevi nakuwuphi na umba, nditsho nangokunxulumene noovimba.
16Wonke loo msebenzi kaSolomon wafezekiswa, kusukela mhla sabekwa isiseko sendlu kaNdikhoyo yada ke yagqitywa. Ewe, yagqitywa indlu kaNdikhoyo.
17Ke uSolomon waya e-Eziyon-gebhere nase-Elati kunxweme lolwandle lwase-Edom. 18Ke uHiram wamthumelela iinqanawa ziqhutywa ngoomatiloshe bakhe, izinto ezazilwazi ulwandle, ziphantsi kweengqwayi-ngqwayi zazo. Bona ke bahamba namagosa kaSolomon baya eOfire, baza babuya bethwele igolide ebunzima buziikhilogram ezilishumi elinesihlanu lamawaka, bazinika ukumkani uSolomon.